Goobaha Kubadda Cagta ee Ruushka - Codes-ka Online Casino Bonus
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Isboortiga ee Ruushka
Loading ... Dhammaan noocyada khamaarka ee Romania maanta waa gebi ahaanba sharci ahaan iyo mid baahsan. Waddanku wuxuu leeyahay taariikh dheer oo qamaar sharci ah tan iyo markii 1906, markii la abuuray Bakhtiyaa Bixinta Qaran ee Bannaanka Romana. Intii lagu jiray kaligii taliyihii kombuyuutarka ee Nicolae Ceausescu khamaar ayaa lagu dhawaaqay sharci darro, laakiin 1990 ayaa la jabiyay nidaamkii, khamaarkuna wuxuu mar kale noqday sharci. Khadka ugu horreeya ee casaan-baxa ee ku-xigeenka Roomaaniya, ayaa lagu furay 1991.
Maanta Romanya wax ka badan XinmaX casinos, iyo sidoo kale in ka badan mashiinada 20, oo ku yaala xarumaha dukaamada, makhaayadaha iyo goobaha kale ee guud ee dalka. Sharciga ciyaaraha ayaa sidoo kale gabi ahaanba sharciga ah, iyo badi magaalooyinka waaweyn ee Roomaaniya, waxaad ka heli kartaa baqshiishyo leh dhar sare. Dhaqanka khamaarka ee Romania ayaa si deg deg ah u bislaaday, warshadaha ayaa hadda ku jira waddanku waa mid aad u horumarsan.
Khamaarista online ee Romania oo kaliya ayaa dhowaan sharci noqotay iyada oo la abuurayo Hay'adda Qaranka ee Khamaarka (Xafiiska Qaranka ee Gaming) April 4, 2013. Tan ka hor, khamaarka online wuxuu ahaa farsamo sharci ah tan iyo markii 2010, markii sharcigu ogolaaday goobaha khamaarka online ee ku yaal Romania, isagoo haysta liis dawladeed. Si kastaba ha noqotee, maqnaanshaha hay'adda sharciyeynta iyo sida waafaqsan sharciyada ciyaaraha khamaarka ee online-ka ah ee Roomaaniya, ganacsatada ma aysan awoodin inay codsadaan.
Maanta dalka waxaa jira khadad badan oo casin ah oo loo heli karo Romaaniyiinta. Ogsoonow in mid ka mid ah shirkadaha maxaliga ahi aysan helin shatiga 2014. Baasaboorka internetka ayaa sidoo kale caan ku ah Roomaaniya, laakiin mar labaad waxaa badanaa ka shaqeeya shisheeye weyn oo aan ruqsaynin Roomaaniyan.
Roomaan - Badda Madow waa muuqaal qurux badan, dooxada caanka ah ee Danube, haraha badan iyo buuraha quruxda badan, jacaylka jacaylka iyo halyaanka qarsoon. Laakiin xitaa socotada dhammaan fursadaha ayaa furan marka ay timaado khamaarka, sababtoo ah waa la ogolyahay dalka waxayna soo bandhigeen dhammaan kala duwanaanta. CasinoToplists ayaa loo diray Bucharest si ay u bartaan warshadaha khamaarka Romaniya.
Roomaaniya - halkaasoo ay jiraan waxoogaa taariikh ah;
Roomaanku wuxuu ku yaalaa koonfurta-bari ee Yurub. Maanta, waa waddan xildhibaan ah oo madax ka ah madaxweynaha Klaus Johannis iyo ra'iisal wasaaraha Victor Ponta. Caasimadda dalka waa magaaladii hore ee Bucharest.
Dalka Roomaanku wuxuu ku noolyahay Cro-Magnon sanado ka hor 42 000. Intii lagu guda jiray dhulkii Roman Empire waxay ahaayeen qayb ka mid ah ka kooban. Marka la eego, magaca casriga ah waxaa loo tarjumay "Roomaan".
Jiilaalka Dhexe ee Roomaaniya waxay ka kooban yihiin Transylvania, Moldavia iyo Wallachia. Sababtoo ah isku dhacyada khilaafaadka ee degaannada da'doodu kala duwan tahay waxay ka mid ahaayeen Boqortooyada Boqortooyada iyo Boqortooyada Boqortooyada.
Qeybta labaad ee qarnigii XIX waa hogaaminta Roomaaniya noqoshada xudduudaha jira. Dhismuhu wuxuu dhammaaday qarnigii labaatanaad. Kadib Kacaanka Ruushka ee 1989 wuxuu bilowday marxalad cusub oo taariikh ah.
Tan iyo markii 2004 Romania waa xubin ka mid ah NATO, iyo tan iyo 2007 - xubin ka ah Midowga Yurub.
Taariikhda casriga ee khamaarka ee Roomaanku wuxuu ka soocaa 1990. Ka dib markii la afgembiyay Ceausescu, dalka ayaa ku soo laabtay ganacsiga khamaarka. Inkastoo markii hore aysan jirin xeerar sharciyaysan, waxay bilaabeen inay ka muuqdaan 1991 imaanshaha of Casino Aistria shirkada Austrian oo samaysay bandhiga ugu horreeya ee caasimada.
1992 wuxuu ka dhex muuqday Guddiga Gaming, kaas oo raacay shaqada dhammaan shirkadaha khamaarka. 1993 waxay ku dhaqantay sharciyada canshuuraha casinos. Ganacsiga khamaarka ayaa helay sumcad aad u ballaadhan oo xukuumadda Roomaanku ay soo saartay ruqsad khasab ah 1998. Dhammaan arrimahan waxaa lagu qeexay sharciga "On regulation of gambling."
ciyaaraha miiska: baaskiil, canasta, baccarat, blackjack, roulette, Punto Blanco;
Sharcigu waa mid aad u adag oo loogu talagalay abaabulayaasha madadaalada khamaarka. Fadlan fiiri qolka qolalka, tirada xarumaha dheeraadka ah, miisaska, ciyaaraha qurxinta iyo wixii la mid ah. Shatiga waxaa lagu helaa oo kaliya macaamilka ganacsiga laftiisa, laakiin sidoo kale ruqsad ka haysta mashiinka ciyaaraha. Caadi ahaan, ruqsadaha waxay shaqeynayaan muddo
1-5 sano. Taariikhahaas ka dib, waxaad u baahan tahay inaad mar labaad baarto, oo aad iibsato shati cusub.
Dhamaan shaqaalaha shirkadaha ciyaaraha khamaarka waxay dhigaan xadka da'da, tusaale ahaan, agaasimayaasha - laga bilaabo sanadka 23. Waxaa jira tirooyin mamnuuc ah oo la xidhiidha diiwaanka dembiga ama ka shaqeeya adeegga madaniga ah.
Ka hor inta aan la furin, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo sanduuqa dammaanadda. Waxaa loo xisaabiyaa si gooni ah.
Romania, badan oo casinos ah oo buuxiya heerarka caalamiga ah. Xaqiiqdii mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee loo tixgeliyo silsiladda Olympic Casino. Waxaa ka mid ah hay'adaha 9, oo ka shaqeeya dadka 3000. Shabakada - xubin buuxda oo ka tirsan Ururka Isboortiga Yurub. Martidu waxay helayaan shuruudaha ugu wanaagsan ee lagu ciyaaro khamaar dhaqameed.
Casino Bükreest - mid ka mid ah casinos ugu caansan ee Bucharest, oo ku dhowaad xaruntii magaalada ee ku yaal Hotel Hotel Intercontinental Hotel 5. Makhaayadaha waa atmospheric: gudaha gudaha ee aan fiicnayn, adeeg fiican oo tababaran, cunto fiican - kaliya waxa aad u baahan tahay ciyaaraha raaxada ah. In Casino Casino Bucharest miiska shaqada 14 miiska ciyaaraha 4 oo leh joornaalada, jadwalka raajada 7.
Muuqaalka Muuqaalka - casino kale oo ka shaqeeya tan iyo 2003. Waxay ku taallaa agagaarka Hotelka Ambassador Hotel Magheru Boulevard. Xaruntu waxay ku taal 1000, waxaa ku yaal labo qol oo VIP ah. Waxaa jira miisaska ciyaaraha 12, waxaadna ka dhigan kartaa shuruudaha laga bilaabo euro 1.
Havana Princess Casino waxay ku taallaa bartamaha magaalada, waxayna qabsadey 1200. Hay'addu waxay shaqaaleysiisaa xirfadleyaal aad u tababaran, oo adeegaya miisaska 12 ee ciyaaraha. Casriyadu waxay diiradda saareysaa martida ajnabiga ah, inta badan waxay ku ciyaaraan halkan socdaalayaasha Shiinaha iyo Turkey.
Taariikhda casinos online ah ee Roomaaniya aad u daacad ah. Inkasta oo khamaarka si rasmi ah loo qoondeeyey loo ogol yahay oo keliya 2015, dhab ahaantii qolalka Roomaaniyadu waxay leeyihiin waqti dheer oo ay ku shaqeeyaan goobaha ciyaaraha. Sanad walba miisaaniyadda ayaa kor u kacday illaa iyo nus bilyan euros.
Sharciya casinosku waxay isku dayeen tan iyo markii 2009, sannad kasta, soo bandhigtay biilal cusub. Laakiin miisaaniyadda la'aanta ee 2014 waxay ugu dambeyntii dawladdu ku adkaysay inay sharciyaysato. Hadda, dhulka ku yaal Romania ayaa si xor ah u ciyaari kara meelaha aad jeceshahay.
Romanian Athenaeum . Cinwaanka: Strada Benjamin Franklin 1-3, Bucureşti. Tani waa hoolka xafladaha quruxda badan ee dalka, oo badanaa loo yaqaan wadnaha Bucharest. Dhismaha waxaa lagu dhisay 1888 qaab muuqaal ah xubno xagjirnimada. Barta casriga ah ee gaarka ah iyo hantida.
Aqalka Baarlamaanka . Cinwaanka: Strada Izvor 2-4, Bucureşti. Calaamadda buurta Spiro - tusaalaha ugu fiican ee wakhtiga bulshada, ka soo qaadista Bucharest on mitirka 86, oo ka tagaya dhulka 92.
Matxafka Qaranka . Cinwaanka: Shoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff 28-30, Bucureşti 011347. Guryaha dibedda ee 272 ayaa laga soo ururiyey qaybo kala duwan oo dalka ah.
Matxafka Qaranka ee Farshaxanka Roomaaniya . Cinwaanka: 49-53, Calea Victoriei, 010063 Bucureşti. Matxafka ugu weyn ee farshaxanka Yurub iyo Romaaniga ah ee 3,000 wuxuu muujinayaa kaydka 60,000.
Beerta Herke . Cinwaanka: Qeybta 1, Bucureşti. Waxaa laga aasaasay 1936 oo ku yaalla xadiiqadda qorraxda ee qarsoodiga ah ee ku yaal waqooyiga Bucharest.
Castle Bran waxaa la dhisay qarnigii XIV - goobaha ugu caansan ee dalxiiska ee dalka, tan iyo markii loo tixgeliyay inay tahay magaca tirinta Dracula.
Romania waxay leedahay Maalinta Xornimada - 9 May. Laakiin tani ma aha maalinta guusha dagaalkii labaad ee adduunka, maalinta xorriyadda ka imanaysa Boqortooyada Ottoman, laga helay 1877.